57% nke ndị mmadụ anaghị atụ aro gị n'ihi na ... | Martech Zone
57% nke ndị mmadụ anaghị akwado ụlọ ọrụ gị n'ihi na ị nwere emezighituri kachasị mobile website. Nke ahụ na-ewute… na anyị maara Martech Zone bụ otu n'ime ha! Ezie na anyị nwere ezigbo ngwa mkpanaaka, anyị maara nke ahụ Jetpack ọkọlọtọ na-ebugharị hae bụ ihe mgbu ile saịtị anyị anya.
Ka anyị na ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ na inyocha ha nchịkọta, ọ na-abịa doo anyị anya nke ukwuu na ndị ahịa anyị na-enweghị ike maka mkpanaka anaghị enwe ọnụ ọgụgụ na ogo nleta ha na-ahụ site na ndị ọrụ ekwentị. Fọdụ, dị ka saịtị a, nwere isiokwu a na-ekwu maka mkpanaka ma anyị anaghị ahụ ezigbo nsonaazụ dịka ndị ahịa anyị nwere saịtị na-anabata. Ọ meela anyị ndị kwere ekwe much nke mere na anyị na-arụ ọrụ dị ukwuu ndi otu okike na mmepe na Exit 31 na iwulite isi okwu ohuru nke na-anabata.
Ọtụtụ n'ime gị na-agụ nke a na smartphone ma ọ bụ mbadamba karịa na laptọọpụ ma ọ bụ desktọọpụ (ọbụlagodi dị ka stats). N'agbanyeghị ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa - nke yiri ka ọ bụ n'abalị - ọ naghị esiri ike nghọta. Anyị bi n'ime ụwa ebe anyị chọrọ Internetntanetị na mkpịsị aka anyị, ekwentị na mbadamba nkume ugbu a nwere ike ịnye ahụmịhe dijitalụ na-agbanwe agbanwe (ma rụọ ọrụ nke ọma) karịa laptọọpụ siri ike na desktọọpụ.
Ihe omuma ihe omuma a sitere na WSI nwere onu ogugu ichoro ichoro ka oghaghagharia na omuma ihe ndi mmadu:
Mobile-Naanị Internet Users - 23% nke United States bụ naanị mobile. Nke ahụ pụtara na ha anaghị eji desktọọpụ ịchọ ma chọta ozi na ntanetị.
Nchọgharị ekwentị - A na-eduzi 1 na nchọta 4 na ngwaọrụ mkpanaka.
Ojiji eji eji - 98% nke ndị mmadụ na-eji mkpanaka ụlọ, 89% na njem, 79% mgbe ha na-azụ ahịa, 74% na-arụ ọrụ yana 64% na njem ọha na eze.
Ọ bụ ihe ijuanya na na 2015, na atumatu olu mmefu na ahịa mkpanaka ga-erute ijeri $ 400 na United States naanị!
Tags: androidụzọ ọpụpụ 31iphonenjikarịcha ekwentịmkpanaka ọchụchọwebụsaịtị mkpanakamobile-naanị ojijina-anabata saịtịsearch engine njikarịchasmartphonembadambamgbe eji mobilewindo ekwentịNkechi